शरीर चित्रकला को ग्यारेज अवस्थामा कार को - यो धेरै लामो छ हुनत, तर प्रभावकारी प्रक्रिया। आफ्नो हात संग रंग काम बनाउने, तपाईं एकदम व्यावसायिक कार्यशालाओं को सेवाहरू पैसा बचत हुनेछ। त्यसैले, तपाईं चित्रकला बूथ मा सेवा मा कार चलाउनु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो हातले सबै केहि गर्न सक्छन्। तर, त्यो परिणाम तपाईं आज हामी छ कि केही चाल जान्नु आवश्यक निराश र हामी कुरा छौँ छैन। त्यसैले घरमा कार रंग कसरी हेरौं।
वाहन को तयारी मा embarking अघि, तपाईं यसलाई पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा काम गर्न रूपमा सरल छ, किनभने मनोवैज्ञानिक ट्युन गर्न आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो सतह dokrashivat शरीर धेरै पटक मा घन्टा को लागि खडा गर्न, विभिन्न स्थानहरू भ्रमण गर्नुपर्छ भनेर याद गर्नुहोस्। र तपाईं, सारा दिन काम गर्न भने थप छैन। एक पटक तपाईं मेरो विचार भेला गर्नुभएको छ, हामी सुरक्षित कार्य गर्न अगाडि बढ्न सक्छ।
तपाईंले पहिले कार रंग आफैलाई, तपाईं ध्यान दिएर शरीर तयार गर्नुपर्छ। सफाई सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो। यसलाई पछि (यो एक प्रयोग कार छ भने) सबै दोष तपाईं रंग को सतह मा देख्न हुनेछ। ध्यान तल, fenders र पाङ्ग्रा arches जाँच्न। तिनीहरूले खियाले छ भने, पूर्ण चित्रकला अघि, नामेट अन्यथा कुनै प्राइमर जंग तपाईंले सुरक्षित हुनेछ हुनुपर्छ। अन्यथा, नयाँ रंग मा केही महिनामा खिया patina reemerged, र तपाईं सबै फेरि माथि यो के गर्न छ।
सबै सामान्य शरीर छ भने, स्प्रे गर्न ताकि तिनीहरूलाई रंग, सबै moldings र छाप फुकाल्नु। छैन (उदाहरणका लागि, गाडीको अगाडीको शिशा) हटाउने भन्ने सक्नुहुन्छ ती भागहरु, polyethylene फिल्म ढाकिएको। एउटै पनि rearview दर्पण को रियर लागू हुन्छ। जब सानो aerosol कणहरु तपाईं रंग पाङ्ग्रा arches र पखेटा नजिक गत्ता वा पीईटी फिलिम टायर आफ्नो सतह मा गिरावट छैन।
पहिले कसरी एक कार रंग गर्न (वा विशेष रंग संग स्प्रे - कुरा छैन), तपाईं प्राइमर हेरविचार गर्नुपर्छ। sanded सतह मा एक aerosol को एक पत्र लागू गरिएको छ। यसको सुकाएपछि अर्को पत्र प्लट। यो प्रक्रिया एक पल्ट दोहोर्याउनुहोस्। शरीर गर्न प्राइमर को3कोट लागू गर्दा, तपाईंले सूक्ष्म कमजोरीहरू छुटकारा रही पक्का हुन सक्छौं। यस मामला मा, रंग ठूलो तापमान उतार चढाव र सूर्यका गर्न प्रत्यक्ष जोखिम सुरक्षित गरिनेछ। तपाईंलाई एउटा विशेष मास्टिक को प्रयोग को लागि थ्रेसहोल्ड रंग भने।
अब हामी डिब्बे उतरदायित्व लिनु। तपाईंले पहिले घरमा कार रंग, 1-2 मिनेट लागि कन्टेनर मिलाउ पर्छ। 10-15 मिनेट को अंतराल (को मार्गदर्शन मा संकेत रूपमा) मा, चरणमा रंग। तापमान को अदालत 15 डिग्री तल छ भने, आधा घण्टा बारेमा प्रतीक्षा हुनेछ। आदर्श रंग मोटाइ 8-12 .mu.m छ। निस्सन्देह, ग्यारेज अवस्थामा यो मूल्य मापन गर्न सकिँदैन, त्यसैले निर्देशित सुझाव मोटर चालकहरुलाई अनुभव -3पत्रहरु मा एक शरीर रंग।
कसरी घर मा कार रंग गर्न? ठीक-मिलाउने प्रक्रिया
यो हाम्रो काम अन्तिम चरण हो। रंग को ताजा कोट सुकेको छ पछि, तपाईं ध्यान दिएर शरीर को सतह पोलिस गर्नुपर्छ, त्यसपछि आफ्नो विशेष एक्रिलिक लाह मा राखे। पछिल्लो तत्व सुकेको छ जब, टाँस्न tonkoabrazivnuyu लिन र फेरि मिसिन पलिश। सबै यो चरण मा घर मा कार रंग कसरी को प्रश्न, बन्द गर्न सकिँदैन।
के कार मा अलार्म राख्नु राम्रो हो? लोकप्रिय मोडेल, सुविधा र समीक्षा समीक्षा
मर्सिडीज बेन्ज W202: कार विनिर्देशों
दानियल Brühl: लोकप्रिय अभिनेता गरेको सफलता को इतिहास
को न्यायाधिकरण के हो? विस्तृत विश्लेषण
के बच्चाहरु उचाई को अनुपात र वजन हुनुपर्छ
क्लाऊस Kinski: जीवनी र काम
व्लादिमीर Kondratyev: जीवनी र फोटो
त्यहाँ अनुहार मा दाह थियो
माछा के हो? नदी र समुद्र माछा (फोटो)
Rene Dekart: एक जीवनी र मुख्य विचारहरू
बरफ शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने? हामी सँगै पत्ता
व्यक्ति को क्रमबद्घ स्थिति के छ?